‘गुण्डागर्दीपूर्ण धम्कीले कसैको साननबोर्ड तोडेर आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्छ?’- भीम रावल – Dainiki Sarokar
‘गुण्डागर्दीपूर्ण धम्कीले कसैको साननबोर्ड तोडेर आफ्नो भन्दैमा आफ्नो हुन्छ?’- भीम रावल
२०७७ फाल्गुन २७, बिहीबार ०६:३९
काठमाडौँ । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक भीमबहादुर रावलले बुधबार प्रदेश कार्यालयमा गरिएको तोडफोडलाई गुण्डागर्दी र अराजकताको संज्ञा दिँदै घटनामा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
तोडफोडमा संलग्नलाई अविलम्ब कारवाही गर्न उनले माग गरेका छन् । घट्नामा संलग्नलाई कारबाही नगरिए उक्त घट्ना सरकार संरक्षित थियो भन्ने पुष्टि हुने पनि उनको आरोप छ । रिपोर्टस क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै रावलले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले कर्ण थापाले आफूलाई स्वघोषित अध्यक्ष घोषणा गरेर गलत काम गरेको भन्दै कडा आपत्ति जनाए । ‘कर्ण थापाको निर्देशनअनुसार केही कार्यकर्ता गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भए’, रावलले भने, ‘म यो घट्नाको निन्दा गर्छु। यो गतिविधिले नेकपा एमालेलाई पनि फुटाउने हो।’रावलले सर्वोच्च अदालतको फैसलाबमोजिम नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) अलग÷अलग हुने अवस्था आएको र आफूहरु अदालतको फैसला कार्यान्वयनतर्फ लागेको सुनाए । उनले भने,‘नेकपाको विवादसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदकले माग दाबी गरेको भन्दा बढी नै फैसला दियो । तर, अदालतको फैसलालाई हामीले पालना गरेका छौँ । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएका छन् । अहिले कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलनलाई क्षतविक्षप्त पार्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ ।’
रावलले एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठक छिट्टै बस्ने पनि सुनाए । उनले भने,‘त्यो बैठकबाट बैठकबाट निर्देशन आउला । विभिन्न कमिटी छन् । ती सबै विधिबाट जान्छन्। अब नयाँ किसिमले जान्छौँ ।’
उनले कर्ण थापाले स्वघोषित अध्यक्ष घोषणा गरेर गलत काम गरेको टिप्पणी गरे । उनले सबैले हिजोको नकारात्मक कुराबाट शिक्षा लिनुपर्ने पनि जनाए ।
अदालतको फैसला आएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग भएको अवस्थामा लेखराज भट्ट इन्चार्ज बनाएर मेरो बोर्ड हटाउने हो त ? भन्दै उनले प्रश्न गरे। उनले भने,‘गुण्डागर्दी गरेर धम्कीले कसैको साननबोर्ड तोडेर आफ्नो मान हुन्छ त ? गृह प्रशासनलाई खबर गरेको छु । हाम्रो सुरक्षा हामी आफैँ गर्छौं भनेको छु । हाम्रो पार्टीका महासचिवलाई पनि जानकारी गराएको छु । कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोगाउने उद्देश्य छ भने यस्तो काम बन्द गर्नुपर्छ ।’
कैलालीको धनगढीमा नेकपा (एमाले)का दुई पक्षबीच विवाद हुँदा कुटाकुट भएको छ । प्रदेश पार्टी कार्यालयमा इन्चार्जको नामका विषयमा विवाद हुँदा बुधबार दिउँसो अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कार्यकर्ताबीच कुटाकुट भएको हो ।
ओलीको व्यक्तिवाद’ विरुद्घ नेपाल प्रदेश र जिल्ला तहसम्म जाने तयारीमा
नायिका रीमा विश्वकर्मा बिहे गर्ने मुडमा